Apple manavao ny "Carpool Karaoke" ary hisy vanim-potoana faharoa | Avy amin'ny mac aho
Taorian'ny fahombiazan'ny vanim-potoana voalohany dia toa miloka be amin'ny atiny manokana i Apple amin'ity taona 2018 ity ary asehony isan'andro izany. Anisan'ireo serivisy ampiana lanjany ny andiany atolotra ao amin'ny Apple Music. Ny iray amin'izy ireo, iray amin'ireo voalohany nipoitra tamin'ny 2017, dia Carpool Karaoke, izay nahazo fandraisana lehibe avy amin'ireo mpamandrika marika ary iray amin'ireo andiany manaraka indrindra ny mpanjifa ny serivisy fandoavam-bolan'ny orinasa.
Noho izany, androany dia mamoaka vaovao iray izahay, izay, taorian'ny antso sasany natao izay nampifandraisan'ny solontenan'ny CBS (orinasam-pamokarana ny programa), Voamarina fa hanana seho faharoa farafaharatsiny ny seho.
Araka ny efa fantatsika, "Carpool Karaoke: The Series" tsy misy afa-tsy amin'ireo mpamandrika Apple Music, ary ny programa dia miorina amin'ny resadresaka amina fiara miaraka amina karazan-mozika mifandraika amin'izany, na mpihira, mpamoron-kira, mpitantana, atleta malaza, mpilalao sarimihetsika, sns. firesahana hatrany ny tontolon'ny mozika.
Anisan'ireo mpilalao malaza indrindra tamin'ny andiany voalohany nifarana tamin'ny taon-dasa, niavaka ireo olona malaza toa an'i Alicia Keys, John Legend, Shaquille O'Neal, John Cena, Lebron James ary Will Smith.
Na dia mbola tsy mahalala na inona na inona momba ny hoentin'ny vanim-potoana faharoa isika, satria mbola tsy nanomboka naka sary akory izy ireo, ka noho izany tsy misy daty famotsorana ofisialy na zavatra hafa toa izany, manantena izahay fa amin'ity volana ity i Apple dia hanazava sy hanazava izay ho vanim-potoana vaovao amin'ny programa vaovao natolotr'i James Corden.
Amin'ny fiezahana hiditra amin'ny tsenan'ny atiny audiovisual, Apple dia mametraka ny ezaka rehetra ataony hahazoana niche amin'ny haavon'ny lehibe toa an'i Netflix na HBO.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple manavao ny "Carpool Karaoke" ary hisy ny vanim-potoana faharoa